Football Khabar » नेइमार र बार्सिलोनाबीच ५ वर्षे सम्झौता !
नेइमार र बार्सिलोनाबीच ५ वर्षे सम्झौता !
यसै समरमा फ्रेन्च क्लब पिएसजी छाडेर पूर्वक्लब बार्सिलोना फर्किने चर्चामा रहेका ब्राजिलियन फरवार्ड नेइमारसँग क्लब बार्सिलोनाले ५ वर्षका लागि सम्झौता गर्ने सहमति बनेको रिपोर्ट बाहिरिएको छ । ब्राजिलको सञ्चार संस्था ‘स्पोर्ट’ले बार्सिलोना र नेइमारबीच ५ वर्षे सम्झौता गर्न प्रारम्भिक सहमति बनिसकेको खबर प्रकाशित गरेको छ ।
सो मिडियाले नेइमार निकट स्रोत उद्धृत गर्दै बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेप मारिया बार्टोमेउले नेइमारसँग बार्सिलोना फर्किन मौखिक सहमति गरेको बताएको छ ।
नेइमारलाई बार्सिलोनाले सन् २०१७ मा विश्वीर्तिमानी २२२ मिलियन युरोमा पिएसजीलाई बेचेको थियो । तर, पिएसजीमा ठूला सफलता पाउन नसकेपछि नइमार क्लब छाड्ने मुडमा पुगेका छन् ।
ब्राजिलमा रहेका नेइमारले हालै मात्र पिएसजीलाई आफू पुनः फेरि फ्रान्स नफर्किने भनेर सन्देश पठाएको खबर बाहिरिएको थियो । त्यसपछि एकाएक नेइमार बार्सिलोना फर्किने अवस्थामा पुगेको चर्चा बढेको हो ।
नेइमारलाई बार्सिलोना फर्काउन कप्तान लिओनल मेस्सीले विशेष भूमिका खेलेको बताइन्छ । बार्सिलोनामा रहँदा मेस्सी र लुइस स्वारेजसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका नेइमार र उनीहरूबीच अहिले पनि निकै राम्रो सम्बन्ध रहेको छ ।
प्रकाशित मिति १० असार २०७६, मंगलवार १३:२०